amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-01-25
Ny loko vita amin'ny infrared akaiky dia mampiseho ny fitrohana hazavana ao amin'ny faritra infrared akaiky 700-2000 nm. Ny fitrohan'izy ireo mafy dia matetika avy amin'ny famindrana fiampangana loko mainty na metaly sarotra. Ireo fitaovam-pifandraisana akaiky infrared dia misy loko cyanine manana polymethine mitohy, loko phthalocyanine ...
Voninkazo fiarovana UV fluorescent
Rehefa eo ambanin'ny hazavana hita maso, ny vovoka fluorescent UV dia fotsy na saika mangarahara, faly amin'ny halavan'ny halavany (254nm, 365 nm) mampiseho loko iray na maromaro fluorescent, Ny tena asany dia ny fisorohana ny fanaovana hosoka amin'ny hafa. Izy io dia karazana loko misy teknolojia avo lenta, ary loko tsara afenina ....
Ny vokatra lehibe
Ny vokatray lehibe dia misy pigment photochromic, pigment thermochromic, pigment UV fluorescent, pigment pigment, glow in dark pigment, optic interferensi pigment, izy ireo dia malaza ampiasaina amin'ny coating, ink, plastika, loko, ary cosmetic orinasa. Izahay koa dia manome sy manamboatra ireo loko sy pi ...